Ibhodi Yezokuphatha | Law & More B.V. | Eindhoven futhi Amsterdam
Blog » Ibhodi Lokuphatha
I-Supervisory Board (ngemuva kwalokhu 'i-SB') ingumgwamanda we-BV kanye ne-NV onomsebenzi wokuphatha kunqubomgomo yebhodi labaphathi kanye nezindaba ezijwayelekile zenkampani nebhizinisi elihambisanayo (Isigaba 2: 140/250 isigaba 2 we-Dutch Civil Code ('DCC')). Inhloso yalesi sihloko ukunikeza incazelo ejwayelekile yalesi sigungu senkampani. Okokuqala, kuyachazwa ukuthi i-SB iphoqelekile nokuthi isethwa kanjani. Okwesibili, imisebenzi eyinhloko ye-SB iyabhekwa. Okulandelayo, amandla wezomthetho we-SB achaziwe. Amandla adlulisiwe e-SB enkampanini yamabhodi amabili axoxwa ngawo. Ekugcineni, lo mbhalo usongwa ngesifinyezo esifushane njengesiphetho.
Isethingi ongayikhetha nezidingo zayo
Empeleni, ukuqokwa kwe-SB akuphoqelekile kuma-NVs nama-BV. Lokhu kwehlukile esimweni se- inkampani ephoqelelwe yamabhodi amabili (bheka futhi ngezansi). Kungase futhi kube yisibopho sokulandela kusuka kumithethonqubo eminingana yemikhakha (njengamabhange nabashuwalense ngaphansi kwendatshana 3:19 yoMthetho Wokulawulwa Kwezimali). Abaqondisi bokwengamela bangaqokwa kuphela uma kunesisekelo esisemthethweni sokwenza lokho. Kodwa-ke, i-Enterprise Chamber ingaqoka umqondisi wokuphatha njengombandela okhethekile futhi wokugcina ku- inqubo yokubuza, lapho isisekelo esinjalo singadingeki khona. Uma umuntu evuna isikhungo sokuzikhethela se-SB, ngakho-ke umuntu kufanele afake lo mzimba kuzindatshana zenhlangano (ekufakweni kwenkampani noma kamuva ngokuchibiyela izindatshana zenhlangano). Lokhu kungenziwa, ngokwesibonelo, ngokudala umzimba ngqo kuzindatshana zenhlangano noma ngokuwenza uncike esinqumweni senhlangano yezinkampani njengomhlangano jikelele wabaninimasheya ('GMS'). Kungenzeka futhi ukuthi wenze isikhungo sincike ekunikezelweni kwesikhathi (isb. Unyaka owodwa ngemuva kokusungulwa kwenkampani) ngemuva kwalokho okungekho sidingo esengeziwe esidingekayo. Ngokuphikisana nebhodi, akunakwenzeka ukuthi kuqokwe abantu bezomthetho njengabaqondisi bokwengamela.
Abaqondisi bokwengamela nabaqondisi abangewona abaphethe
Ngaphandle kwe-SB esakhiweni esinezitezi ezimbili, kungenzeka futhi ukuthi ukhethe isakhiwo sebhodi elilodwa. Kuleso simo ibhodi linezinhlobo ezimbili zabaqondisi, okungabaqondisi abaphethe nabaqondisi abangewona abaphethe. Imisebenzi yabaqondisi abangewona abaphathi iyefana naleyo yabaqondisi abengamele i-SB. Ngakho-ke, le ndatshana iyasebenza nakwabaqondisi abangewona abaphathi. Kwesinye isikhathi kuphikiswa ukuthi ngenxa yokuthi abaqondisi abaphethe nabangewona abaphethe bahlala emzimbeni owodwa, kunomkhawulo ophansi wesibopho sabaqondisi abangewona abaphethe ngenxa yokuthi kungenzeka kube nolwazi olungcono. Kodwa-ke, imibono ihlukene ngalokhu futhi, ngaphezu kwalokho, kuncike kakhulu ezimweni zecala. Akunakwenzeka ukuba nababili babaqondisi abangewona abaphethe kanye ne-SB (i-athikili 2: 140/250 isigaba 1 se-DCC).
Imisebenzi yeBhodi Yokwengamela
Imisebenzi esemthethweni ye-SB yehlela imisebenzi yokuphatha nokweluleka maqondana nebhodi labaphathi kanye nezindaba ezijwayelekile zenkampani (i-athikili 2: 140/250 isigaba 2 se-DCC). Ngaphezu kwalokho, i-SB nayo inesibopho njengomqashi webhodi labaphathi, ngoba inquma noma okungenani inomthelela omkhulu ekukhetheni, (kabusha) ukuqokwa, ukumiswa emsebenzini, ukuxoshwa, inkokhelo, ukwahlukaniswa kwemisebenzi nokuthuthukiswa kwamalungu ebhodi labaphathi. . Kodwa-ke, abukho ubudlelwane obuphezulu phakathi kwebhodi labaphathi ne-SB. Ziyizinhlangano ezimbili ezihlangene, ngayinye inemisebenzi yayo namandla. Imisebenzi esemqoka ye-SB kusingathwa ngayo kabanzi ngezansi.
Umsebenzi wokuphatha usho ukuthi i-SB ibheka inqubomgomo yokuphatha kanye nemicimbi ejwayelekile. Lokhu kufaka, isibonelo, ukusebenza kwabaphathi, isu lenkampani, isimo sezimali nokubika okuhambisanayo, ubungozi benkampani, ukuthobela nenqubomgomo yezenhlalo. Ngaphezu kwalokho, ukuphathwa kwe-SB enkampanini yabazali nakho kudlulela kunqubomgomo yeqembu. Ngaphezu kwalokho, akukhona nje kuphela ngokuqondiswa ngemuva kweqiniso, kodwa futhi nokuhlola inqubomgomo (yesikhathi eside) okusazosetshenziswa (isib. Utshalomali noma izinhlelo zenqubomgomo) ngendlela enengqondo ngaphakathi kwemingcele yokuzimela kokuphatha. Kukhona futhi ukwenganyelwa kokubambisana kwabaqondisi bokuqondisa maqondana nomunye nomunye.
Ngaphezu kwalokho, kunomsebenzi wokweluleka we-SB, obuye uthinte imigqa ejwayelekile yenqubomgomo yokuphatha. Lokhu akusho ukuthi iseluleko siyadingeka kuzo zonke izinqumo ezithathwa ngabaphathi. Ngemuva kwakho konke, ukuthatha izinqumo ngokusebenza kwansuku zonke kwenkampani kuyingxenye yomsebenzi wabaphathi. Noma kunjalo, i-SB inganikeza izeluleko eziceliwe nezingacelwanga. Lesi seluleko akudingeki silandelwe ngoba ibhodi, njengoba kushiwo, liyazimela ezinqumweni zalo. Yize kunjalo, izeluleko ze-SB kufanele zilandelwe ngokungathi sína ngenxa yesisindo i-SB esinamathela eselulekweni.
Imisebenzi ye-SB ayihlanganisi amandla okumela. Ngokomthetho, i-SB noma amalungu ayo awagunyaziwe ukumela i-BV noma i-NV (ngaphandle kokuhlukile okusemthethweni). Ngakho-ke, lokhu ngeke kufakwe kuma-athikili wenhlangano, ngaphandle kwalapho kulandela umthetho.
Amandla eBhodi Yokwengamela
Ngaphezu kwalokho, i-SB inamandla amaningi alandela umthetho osemthethweni noma izindatshana zenhlangano. Lawa ngamanye amandla abalulekile we-SB:
Amandla okumiswa kwabaqondisi, ngaphandle kwalapho kubekiwe ngenye indlela kuma-athikili wenhlangano (indatshana 2: 147/257 DCC): ukumiswa okwesikhashana komqondisi emisebenzini yakhe nasemandleni akhe, njengokubandakanyeka ekuthathweni kwezinqumo nasekumeleleni.
Ukwenza izinqumo maqondana nezintshisekelo zamalungu ebhodi labaphathi (i-athikili 2: 129/239 isigatshana sesi-6 DCC).
Ukuvunywa nokusayinwa kwesiphakamiso sokuphathwa kokuhlanganiswa noma ukwehliswa (i-athikili 2: 312 / 334f sub 4 DCC).
Ukuvunywa kwama-akhawunti wonyaka (i-athikili 2: 101/210 isigatshana 1 DCC).
Endabeni yenkampani efakwe kuhlu: ukuthobela, ukugcina nokudalula isakhiwo sokuphathwa kwenkampani.
Ibhodi labaphathi enkampanini esemthethweni yamacala amabili
Njengoba kushiwo ngenhla, kuphoqelekile ukusungula i-SB enkampanini esemthethweni yamacala amabili. Ngaphezu kwalokho, leli bhodi libe selinamandla athe xaxa asemthethweni, ngokulinyazwa kwegunya loMhlangano Jikelele Wabaninimasheya. Ngaphansi kohlelo lwamabhodi amabili, i-SB inamandla okuvuma izinqumo ezibalulekile zokuphatha. Ngaphezu kwalokho, ngaphansi kohlelo oluphelele lwamabhodi amabili i-SB inamandla okuqoka nokuxosha amalungu ebhodi labaphathi (i-athikili 2: 162/272 DCC), kanti uma kuyinkampani ejwayelekile noma enomkhawulo wamandla amabili lokhu kungamandla we-GMS (indatshana 2: 155/265 DCC). Okokugcina, enkampanini esemthethweni yamacala amabili i-SB ibuye iqokwe yi-General Assembly yabaninimasheya, kepha i-SB inelungelo elisemthethweni lokuqoka abaqondisi bezokuphatha ukuze baqokwe (indatshana 2: 158/268 (4) DCC). Ngaphandle kokuthi i-GMS noMkhandlu Wezemisebenzi bangenza izincomo, i-SB ayibophekile kulokhu, ngaphandle kokuphakanyiswa okuyisibopho kwengxenye eyodwa kwezintathu ze-SB yi-WC. I-GMS ingakwenqaba ukuphakanyiswa ngamavoti amaningi kakhulu futhi uma lokhu kumelela ingxenye eyodwa kwezintathu yenhlokodolobha.
Ngiyethemba ukuthi le ndatshana ikunikeze umbono omuhle nge-SB. Ngakho-ke ukufingqa, ngaphandle kwalapho isibopho silandela kumthetho othile noma lapho kusebenza uhlelo lwezigaba ezimbili, ukuqokwa kwe-SB akuphoqelekile. Ngabe ufisa ukwenza kanjalo? Uma kunjalo, lokhu kungafakwa kuma-athikili wokuzihlanganisa ngezindlela ezahlukahlukene. Esikhundleni se-SB, isakhiwo sebhodi lesigaba esisodwa singakhethwa futhi. Imisebenzi esemqoka ye-SB wukuqondisa nokweluleka, kepha ngaphezu kwalokho i-SB nayo ingabonakala njengomqashi wabaphathi. Amandla amaningi alandela emthethweni futhi angalandela kusuka kuzindatshana zenhlangano, okubaluleke kakhulu esikuhlome ngezansi. Ekugcineni, sikhombisile ukuthi esimweni senkampani enamabhodi amabili, amandla amaningi anikezwa yi-GMS kwi-SB nokuthi yini okubandakanya.
Ngabe usenemibuzo ngemuva kokufunda le ndatshana emayelana nebhodi labaphathi (imisebenzi namandla alo), ukusetha ibhodi eyengamele, uhlelo lwebhodi elilodwa neli-tier noma inkampani ephoqelekile yamabhodi amabili? Ungaxhumana Law & More kuyo yonke imibuzo yakho ngale ndaba, kodwa nakwabanye abaningi. Abameli bethu babanzi kakhulu, phakathi kokunye, umthetho wezinkampani futhi bahlala bekulungele ukukusiza.
Thumela Previous Ukungena nokuphuma kwenkampani esemthethweni yamacala amabili
Post Next Indima yeBhodi Lokuqondisa ngezikhathi zobunzima